Madaxweynaha DGPL, madaxweyne xigeenka iyo Wasiirka Maaliyadda oo ka qayb galay kulankii Baarlamaanka....
Garoowe: Sabtidii July 15, 2006 sidii loo ballansanaa waxaa kulankii baarlamaanka ee DGPL ka soo qayb galay madaxweyne Maxamuud Muuse Xirsi Boqor, madaxweyne xigeenka Xasan Daahir Afqurac iyo wasiirka maaliyadda Dr. Maxamed Cali Yuusuf (Gaagaab).
Baarlamaanka ayaa hore u dalbaday in masuuliyiintaasi u hor yimaadaan barlamaanka arrimo la xiriira xisaabtan maaliyadeed. Haddaba qoraladii ay warbaahinta Puntland kulankii baarlamaanka ee Sabtidii ka qoreen hoos ka akhri:
Faafin: SomaliTalk.com | July 16, 2006
Fadhigii Baarlamanka PL ka yeeshay Miisaaniyada oo ay Xukuumada ka qeyb gashay
Garowe:- Kalfadhigii Baarlamaanka Puntland ee maanta (Sabti 15 July 2006)
ayaa waxa ka soo qayb galay Golaha xukuumada oo ay horkacayaan Madaxweynaha iyo Kuxigeenkiisa, Golaha Garsoorka iyo marti sharaf kale.
Kulankan maanta ayaa waxa lagaga hadlay ku dhaqan la'aanta miisaaniyada dawladda Puntland.
Hadaba ugu horrayntii ayaa waxa halkaasi warbixin ay guddiga joogtada ahi ay soo diyaarisay ka hor akhriday xildhibaanad Saynab Ugaas Yaasiin.
Warbixintaas ayaa ujeedadeedu ahayd waxyaabaha ay fulisay iyo waxa aanay fulin wasaaradaha DGPL.
Intaasi ka dib ayaa waxa hadalkii qaatay guddiga dhaqaalaha xubin ka mid ah oo la yiraahdo xildhibaan Maxamed Cali Guuleed.
Wuxuuna halkaasi ka akhriyey ku talagalka miisaaniyadda sannadkii 2004 ilaa 2005 waxayna guddigaasi soo bandhigeen hay'adaha dawladda sannadkii miisaaniyada ay lahayd waxa ay qabto iyo waxa aanay qabin.
Guddiga dhaqaalaha golaha wakiilada ayaa waxa ay halkaasi ka caddeeyeen in hay'adaha qaar ay ka maqan tahay halka qaar kalena ay qabaan dheeri ka baxsan ku talagalka miisaanidda sannadlaha.
Ugu dambayntii guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada ayaa waxa ay halkaasi ka soo jeediyeen talo bixin ku wajahan xukuumada oo ah ku dhaqanka miisaanidda.
Intaasi ka dib ayaa waxa halkaasi ka hadlay Madaxweynaha DGPL Md.Maxamud Muuse Xirsi (Cadde Musse) wuxuuna sheegay in guddiga dhaqaalaha iyo guddiga joogtada ah warbixintoodu tahay sax waxaana ka balan qaadayaa in dawladdu ay ku dhaqanto miisaaniyada, laakiin waxa jira in xaaladda nabadgelyada loo baahdo in wax laga qabto kharash badanina uu ku baxo.
Waxaanse idin sheegayaa in maanta ay xiran tahay Wasaaraddiii Maaliyada shaqaalaheediina ay idin horfadhiyaan iyo Wasiirkeedii in aad la xisaabatantaan, ayuu Yiri Madaxweynaha Puntland oo la hadlayey Xildhibaanada.
Intaasi ka dib ayaa waxa halkaasi ka hadlay Wasiirka Maaliyada Md.Maxamed Cabdi Yusuf (Gaagaab).
Waxaanu yiri in marka hore ay maanta anniga farxad ii tahay in aan halka ka hadlo kana soo jeediyo ku dhaqan la'aanta miisaaniyada sababta keenatay.
Marka hore xukuumada ayaan ka wadi la'nahay shaqada wasaaradda maadaama ay waraaqaha ugu badan ay ka yimaadaan xukuumada kuwaas oo u badan kharashaadka ku baxa:
- iibka gaadiidka,
- xaalada nabadgelyada
- kharashayada ku baxa dawladda federaalka marti gelintooda iwm,
ayaa keenay in miisaaniyada aan lagu dhaqmin oo la isticmaalo wax ka baxsan miisaaniyadda.
Tan kale lacagta shaqaalaha laga jaro lama deyn karo waayo waxa ay kabaysaa mushaharka shaqaalaha iyo adeegga dawladda maadaama bilaha qaaar lagu jiri bad xiran sida bishan juun oo aan ilaa hadda la hayn mushaharkeedii.
Isku soo wada duuboo kulankii Baarlamaanka Puntland ka yeeshay Miisaaniyada ayaa waxa ay xukuumaddu balan qaaday in Wasaaradda Maaliyada iyo Guddiga dhaqaalaha ee Golaha Wakiiladu ay wada shaqeeyaan miisaaniyadana lagu dhaqmo wixii ka dheerna loo soo gudbiyo golaha wakiilada si ay u ansixiyaan.
Kalfadhigii Maanta ayaa waxaa sidoo kale Marti sharaf ku ahaa lana socday Dooda Baarlamaanka, Wafdi Balaaran oo ka socda Beesha Caalamka iyo guddiga JNA ee barnaamijka dib u dhiska Soomaaliya oo safar ku yimid Garowe.
GAROOWE : M/waynaha Puntland Cadde Muuse oo Golaha Wakiilada hortooda ka go�aamiyay in Miisaaniyada sideedii loo daayo , marka laga reebo
Garoowe:-Cadde Muuse M/waynaha DG Puntland ayaa manta goordhawayd Golaha Wakiilada Puntland hortooda ka go�aamiyay in Miisaaniyada sidii loogu talagalay loo meel-mariyo , marka laga reebo arimaha deg-deg ah ee la xiriira ammaanka.
Go�aanka M/waynaha , ayaa la xirira kadib marki Guddiga dhaqaalaha Puntland ay M/waynaha , kuxiogeenkiisa iyo Wasiirka Maaliyada u yeereen kadibna ay u soo jeediyeen in Miisaaniyada dawlada aysan u bixin sidii loogu talagay oo la bixiyo kharashaad ka baxsan Miisaaniyada islamarkaasna aan wax mushaar ah la siin shaqaalihii dawlada.
Axmed-bare oo ka mid ah Xildhibaanada Guddiga Dhaqaalaha , ayaa M/waynaha u soo jeediyay in loo baahan yahay in shaqaalaha Mushaarkooda la siyo si joogta ah gaar ahaan Ciidanka , wuxuuna sheegay in Ciidanka oo aan mushaar la siin , aan lagu amri Karin in ay ka shaqeeyaan arimaha ammaanka.
Wuxuuna codsaday , hadii dhaqaale lagu bixinayo wax uu ugu yeeray xaalad abuur iyo caafimaad in loo qoondeeyo oo loo siyaadiyo dhaqaalaha loogu talagalay balse loo baahan yahay in markasta la helo mushaarka.
Cadde Muuse , ayaa garwsiiyo ka bixiyay hadalka Axmed-bare wuxuuna sheegay dhibaatada ugu badan oo haysata in ay tahay wax uu ugu yeeray xaalad abuur iyo warqado caafimaad , taa soo inta badan ka timaada 2-da Gole ee dawlada.
Dr. Maxamed Cali Yuusuf (Gaagaab) Wasiirka Wasaarada Maaliyada , ayaa isagu sharaxaad kooban ka bixiyay dhaqaalaha siyaadada ah ee ka baxsan Miisaaniyada meelaha ay ku baxaan , wuxuuna sheegay in ay u badan tahay warqadaha Caafimaadka oo inta badan 2-da Gole , ay soo qortaan , Arday Jaamacado loo diro , Dhaqaale deg-deg ah oo la siiyo saraakiisha ammaanka marka ay yiraahdaan xaalad deg-deg ah baajirta , baabuur tira-badan oo loo gaday dawlada iyo masuuliyiinta dawlada , kharashaad badan oo ku baxa safarada iyo booqashada ay Masuuliyiitna DFKS ay ku yimaadaan gobolka.
Arimahaas , ayaa sababa in ay timaado in la isticmaalo kharashaad ka baxsan Miisaaniyada , waana soo dhawaynayaa qodobada ay soo jeediyeen Guddiga dhaqaalaha ayuu yiri Gaagaab Wasiirka Maaliyada.
Si kastaba , waxaa meesha ka muuqatay oo ay isla qireen Masuuliyiinta dawlada in kharashaadka ku baxa dawlada oo ay u isticmaalaan waxyaalo caafimaad kaafiy-karo mushaarooyinka shaqaalaha oo dhan.